यी ठाउँहरुबाट हाले चर्चित नामहरुले भोट ! | Emedia Hub UK
Home News यी ठाउँहरुबाट हाले चर्चित नामहरुले भोट !
यी ठाउँहरुबाट हाले चर्चित नामहरुले भोट !
Posted By: Prakash Raion: May 14, 2017 In: News, Photo News, Politics, नेपाल समाचारNo Comments
काठमाडौँ । पहिलो चरणको आइतबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार समग्रमा ७१ प्रतिशत मत खसेको छ ।आईतबार
बिहानैदेखि मतदाताहरुको उत्साहजनक सहभागितमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आ–आफ्नो निर्वाचन केन्द्रमा पुगी भोट हालेका थिए ।
मताधिकार प्रयोग गर्ने नेपालका चर्चित नामहरुले कहाँ कहाँबाट भोट हाले
आईतबार बिहान ७ बजेर ८ मिनेट जाँदा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ स्थित लक्ष्मी मावि लङ्कुको मतदान केन्द्र ‘ख’ बाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मतदान गरेका छन् ।
उनी शनिबार मतदानका लागि परिवारसहित चितवन गएका थिए ।
उनका छोरी रेणु दाहाल र गङ्गा दाहालले पनि सोही केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । श्रीमती सीता दाहालको भने शिवनगरस्थित निमावि शान्तिपुरमा केन्द्र परेकाले मतदान गरेकी जनाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोट हालीसकेपछि नेपालमा पहिलोपटक अधिकार सम्पन्न भएको बताए । उन्ले स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले जनतामा निकै ठूलो उत्साह भएको बताए, भने कांगं्रेसको संगको सहकार्यकै आधारमा आफुले मत हालेको समेत बताए ।
त्यस्तै हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ५, पिप्लेस्थित बाल ज्योति माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा राष्ट्यि प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मतदान गरेका थिए ।
बिहान ७ बजेर ४० मिनेट जाँदा उनले मतदान गरेका हुन् ।
यसैबीच नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलले तनहुँको सत्यवादी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् ।
त्यस्तै, गोरखा पालुंगटार नगरपालिका–१ स्थिति अन्नपूर्ण माविको बुथमा पुगेर नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले मतदान गरेका हुन् ।
त्यस्तै काठमाडौँको मेयरका प्रत्यासी तथा साझा पार्टीका उम्मेदवार किशोर थापाले सपरिवार मतदान गरेका थिए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले मतदान गरेका छन् ।
एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीले पोखरा लेखनाथ ३३ को शान्ति उदय मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
भक्तपुर दरबारक्षेत्रमा रहेको विद्यार्थी निकेतन मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका बिजुक्छेले बीस बर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानले प्रजातन्त्र सुदृढ पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन पछि स्थानीय तहको विकास निर्माणको गति बढ्ने भएकाले जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि राम्रो संग छान्नेमा आफु विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ डिल्लीबजारस्थित कन्या क्याम्पस केन्द्रमा बिहान ८ः१५ बजे मतदान गरेका थिए ।
काठमाडौँको मेयर पदको प्रत्यासी रहेकी विवेकशील नेपालीकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले पनि मतदान गरेकी छिन् ।
त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगरप्रमुखका काँग्रेसका उम्मेदवार राजुराज जोशीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अनुशासन विभागका अध्यक्ष अमिक शेरचनले महानगरको वडा नं २६ को दिव्यनगर मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका थिए ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मतदान काठमाडौको मैतीदेवी मन्दिरको मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भक्तपुर दरबारक्षेत्रको विद्यार्थी निकेतन मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका छन । बिजुक्छेले २० बर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानले प्रजातन्त्र सुदृढ पार्ने बताए ।
२०५४ सालमा निर्वाचन भएपनि २०५८ सालपछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएका छन् । कर्मचारीले नै स्थानिय तह सञ्चालन गरेका थिए । मतदाताहरु अधिकांश मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि उत्साहका साथ मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लाका पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानीय तहमा वैधानिक रुपमा हस्तान्तरण हुदैछ । निर्वाचनबाट गाउ“पालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष, दुई खुला वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित हुने छन । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट ४ महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र ९२ नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख तथा १८६ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने छन ।
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईले मतदान गर्दै । गोरखा पालुंगटार नगरपालिका–१ स्थिति अन्नपूर्ण माविको बुथमा पुगेर उनले मतदान गरेका हुन् । तस्विर सामाजिक सञ्जाल
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा मतदान गर्दै ।
कलाकार तथा नायक दिपराज गिरि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा भोट गर्दै ।
आयोगले भन्यो-चुनाव उत्साहजनक सहभागिता, समग्रमा ७१ प्रतिशत मत खस्यो
चार महानगरपालिकाको मतपरिणाम हेर्नुस् [अपडेट]